Haweenay karsatay hilbaha ninkeeda - BBC News Somali
Image caption Haweenaydan ayaa inta ay karisay hilibka saaxibkeed waxa ay ku karisay Bariis
Dilka ninkan ayaa la ogaaday ka dib markii ilko bina'aadam laga dhex helay makiinada lagu shiido khudaarta.
Markii ay booliiska gacanta ku dhigeen ayay haweenaydan qiratay dambigeeda,waxa ayna ku tilmaamtay ficilka ay samaysay in uu ahaa"mid doqonnimo ah", sida uu qoray wargeyska The National ee ay dowladda Imaaaraadka leedahay.
Ninka la dilay walaalkii ayaa ka dib waxa uu ilko bina'aadam ka helay makiinada lagu shiido khudaarta, sida uu qoray wargayska dowladda Imaaraadka.
Ninka la dilay walaalkii ayaa ka dib booliiska ku wargaliyay in walaalkii la la'yahay islamarkana waxaa dhiigda DNA laga qaaday ilkihii la helay markaasi oo la xaqiijiyay in ilkahani ay yihiin kuwii ninka maqan.
Balse haweenaydan markii ay booliiska su'aalo waydiiyeen ayay taagnida ka dhacday markaasi oo ay qiratay dilka ninka ay saaxibka ahaayeen.